Nxt စျေး - အွန်လိုင်း NXT ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Nxt (NXT)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Nxt (NXT) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Nxt ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $13 601 136.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Nxt တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Nxt များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
NxtNXT သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0609NxtNXT သို့ ယူရိုEUR€0.0508NxtNXT သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.044NxtNXT သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.056NxtNXT သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.508NxtNXT သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.378NxtNXT သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč1.32NxtNXT သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.231NxtNXT သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0762NxtNXT သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0787NxtNXT သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$1.21NxtNXT သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.473NxtNXT သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.34NxtNXT သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹4.54NxtNXT သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.9.34NxtNXT သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0813NxtNXT သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0853NxtNXT သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿1.9NxtNXT သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.397NxtNXT သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥6.63NxtNXT သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩68.01NxtNXT သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦25.02NxtNXT သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽4.6NxtNXT သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴1.71
NxtNXT သို့ BitcoinBTC0.000001 NxtNXT သို့ EthereumETH0.00003 NxtNXT သို့ LitecoinLTC0.000273 NxtNXT သို့ DigitalCashDASH0.000235 NxtNXT သို့ MoneroXMR0.000231
NxtNXT သို့ Ethereum ClassicETC0.00316 NxtNXT သို့ DogecoinDOGE1.01 NxtNXT သို့ ZCashZEC0.000352 NxtNXT သို့ BitsharesBTS0.53 NxtNXT သို့ DigiByteDGB0.761 NxtNXT သို့ RippleXRP0.065 NxtNXT သို့ BitcoinDarkBTCD201418.11 NxtNXT သို့ PeerCoinPPC0.0624 NxtNXT သို့ CraigsCoinCRAIG2662991217.39 NxtNXT သို့ BitstakeXBS0.0245 NxtNXT သို့ PayCoinXPY24.36 NxtNXT သို့ ProsperCoinPRC6090133.98 NxtNXT သို့ YbCoinYBC0.00003 NxtNXT သို့ DarkKushDANK1873956782.6 NxtNXT သို့ GiveCoinGIVE12649208282.58 NxtNXT သို့ KoboCoinKOBO4.69 NxtNXT သို့ DarkTokenDT0.0561 NxtNXT သို့ CETUS CoinCETI843280552.17
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Sun, 18 Apr 2021 11:10:01 +0000.